Happy New Year 2017 Wallpaper Images Wishes Quotes Greetings: Happy New Year Nepali Messages
Showing posts with label Happy New Year Nepali Messages. Show all posts
Happy New Year 2017 Wishes Quotes Greetings in Nepali
Happy New Year 2017 Wishes Quotes Greetings in Nepali. New Year Wishes In Nepali Language, Happy New Year In Nepali Language, Happy New Year Nepali Messages, Best Nepali New Year Sms, Nepali New Year Sms In English, Nepali New Year Wishes Quotes, New Year Sms In Nepali Language.
Hi companions, Today I need to share some most recent and one ofakind New Year Wishes Messages in Nepali dialect. You can wish to your loved ones part on Facebook, Twitter, StumbleUpon and so on. So Don't neglect to share to your loved ones part.
काम अधिक भोक र आवेग अर्को वर्ष गर्न तत्पर र तपाईं सफलता संग भेट्न पक्का हो।
नयाँ वर्ष निष्कपटता, शान्ति र आनन्द संग आफ्नो जीवन भर्न सक्छ। एक धेरै खुसी नयाँ वर्ष तपाईं चाहने।
एक धेरै खुसी नयाँ वर्ष तपाईं-इच्छा लागि नयाँ वर्ष नयाँ जीवन को एक सुरुदेखि चिनो गरौं।
चुनौतीहरूको लागि प्राप्त र आँधी देख्नासाथ पछि एक बलियो र राम्रो व्यावसायिक रूपमा निस्कनु गर्न तयार।
नयाँ वर्ष dawns रूपमा, म यो एक उज्जवल भोलि को प्रतिज्ञा भरिएको छ आशा। नयाँ बर्षको शुभकामना!
नयाँ वर्ष गर्न चियर्स। यो एक अविस्मरणीय एक हुन सक्छ। नयाँ बर्षको शुभकामना।
म तिमीलाई धेरै खुसी नयाँ वर्ष इच्छा। तपाईं अगाडी एक महान समय छ आशा।
म तिमीलाई धेरै मीठा र समृद्ध नयाँ वर्ष इच्छा। परमेश्वरले तपाईंलाई आफ्नो प्रेम र आशीर्वाद खन्याउनु सक्छ। आनन्द लिनुहोस्!
यो नयाँ वर्ष मा, म तिमीलाई प्रशस्त मात्रामा मा मित्र को प्रेम र परिवार इच्छा। नयाँ बर्षको शुभकामना।
शान्ति आफ्नो हृदय र समृद्धिको आउन यो नयाँ वर्ष मा आफ्नो जीवन शासन शासन सक्छ। नयाँ बर्षको शुभकामना।
नयाँ वर्ष आफ्नो जीवनमा तपाईं बुद्धिको प्रेमको गर्मी, र प्रकाश ल्याउन सक्छ। नयाँ बर्षको शुभकामना।
यो नयाँ वर्ष तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि सबै भन्दा राम्रो हुन सक्छ। नयाँ बर्षको शुभकामना।
यो नयाँ वर्ष संग, म तिमीलाई एक राम्रो कल र एक राम्रो आज प्राप्त इच्छा! नयाँ बर्षको शुभकामना।
परमेश्वरले मात्र आज तपाईं आशिष् दिनुहुन्छ सक्छ तर साल भर पालना गर्न! नयाँ बर्षको शुभकामना।
म जयजयकार साथ नयाँ वर्ष आभा हरेक दिन इच्छा र आफ्नो जीवन आनन्द दिन्छ। नयाँ बर्षको शुभकामना।
मई आनन्द र समृद्धिको वर्षैभरि तपाईं संग रहेको! नयाँ बर्षको शुभकामना।
तपाईं यस नयाँ वर्षमा एक स्वस्थ शरीर, एक धनी मन, एक राम्रो हृदय प्राप्त इच्छा। नयाँ बर्षको शुभकामना।
म आउन यो नयाँ वर्षमा आफ्नो हृदय भित्र तपाईं स्वास्थ्य र शान्ति इच्छा। भगवानले तिम्रो रक्षा गरुन।